ကုလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ကုလား
Posted by phone_kyaw on Jun 6, 2012 in Critic | 51 comments
ကုလားဆိုတဲ့နာမည်ကို ဘယ်သူက တီထွင်တာလဲဆိုတာကို အတိအကျမသိရဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကုလားဆိုတာ ကူးလာ…ကူးလာဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ ့နီးစပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အချိန်ကာလကြာလာနဲ ့အမျှ ကုလားဆိုတဲ့ စကားလုံးဖြစ်လာတယ်လို ့ကောက်ချက်ချနိုင်တယ်။ ဒီစကားလုံးကို စိတ်ဆိုးစရာလိုလို ့လား။ မလိုပါဘူး။
ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ မွတ်စလင်လည်းရှိတယ်။ ဟိန္ဒူလည်းရှိတယ်။ တခါတလေကြရင် သူတို ့ကို စောက်ကုလားလို ့တောင် နာမည်ပေးတယ်။ ဒါတွေကို သူတို ့စိတ်မဆိုးပါဘူး။
သူတို ့အပြင် ချင်းလူမျိုးတွေကို စောက်ချင်းလို ့ခေါ်သလို၊ ပုလုံးလို ့တောင်းလို ့လည်းခေါ်တယ်။ နောက်တာပါ။ ရခိုင်ဆိုရင်လည်း အလားတူပဲ။ ကျနော်က ရခီးလို ့ခေါ်တယ်။ သူတို ့က ဗမာတွေကို ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ စောက်ကုလားတဲ့။ အသားမည်းလို ့။
ဒီလိုမျိုးအခေါ်အဝေါ်တွေက နာစရာမှ မဟုတ်တာ။ အခုကြမှ ဘာဖြစ်လို ့များ ကုလားခေါ်တာ နာကြတာလဲမသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့်သူငယ်ချင်းကုလားကို စောက်ကုလားလို ့ဆက်ပြီးခေါ်အုံးမှာပဲ။ ကုလားကလည်း ရခိုင်ကိုတီးတယ်။ ရခီးကလည်း ခေသူမဟုတ်တော့ ပြန်ဆော်တာပေါ့ဗျာ။
ဒါက လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှု ့ပဲ။ ခင်ဗျားတို ့ကုလားပဲကြည့်ကြည့် ရခိုင်ပဲကြည့်ကြည့် အကုန်လုံးက အသားမည်းတာ အတူတူပဲ။ ဖြူတဲ့သူတော့ရှိတယ်။ ဒါနဲ ့များ အခုကြမှ ဖြစ်နေလိုက်ကြတာ။ ဘာမှလုပ်မနေနဲ ့အတူတူမနေချင်ရင် ကုလားနဲ ့ရခိုင်အကုန်လုံး သေအောင်သတ်ကြ။ သူတို ့သေရင် ရခိုင်က ဓာတ်ငွေ ့ကို တရုတ်ရမယ်။ ရိုဟင်ဂျာအရေးအော်နေတဲ့ လူတွေက နိုင်ငံခြားက လူတွေချည်းပဲ။
မြန်မာပြည်က ကုလားက ရိုဟင်ဂျာကို စိတ်ဝင်စားဖို ့နေနေသာသာ ကွမ်းယာရောင်းတာတောင် လက်မလည်ဘူး။ တကယ်တမ်းသတိ္တရှိရင် နိုင်ငံခြားက ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ပြည်တွင်းမှာ လာအော်ကြည့်ပါလား။ တခါတည်း ဝက်သားနဲ ့ညားသွားနိုင်တယ်။ မရိုးသားတာကို ပြောချင်လို ့ပါဗျာ။
ဝက်သားဆို သများက အရမ်းကြိုက်တာချင့်
ဒါနဲ့ ဝက်တစ်ပိသာ ဘယ်လောက်တုန်းတော့
လှည်းတန်းဈေးမှာ ၇၀၀ဝကျပ် အခွန်လွတ်ဈေးမှာ ၅၀၀ဝကျပ် ဒါဘဲပြောမယ် ;)
မင်အမေလင်နေ့တိုင်းထိုင်ရှစ်ခိုးနေရတဲ့ အိန္ဒိယသား ဗုဒ္ဓ ကုလားကလဲဝက်သာကြိုက်လို့
နောက်ဆုံးဝမ်းလျောပြီးသေရတယ်ဆို တာမေ့နေပြီလား။ မင်းတို့နေ့တိုင်းအဖေကို ဘာဘာခေါ်နေရတာမေ့နေပြီလား
ကြိုက်လို ့ကြိုက်တယ်ပြောဒါ ပြောဘစေ..
ြိကိုက်တဲ့လူစား..မကြိုက်တဲ့လူ မစားနဲ ့..ဘသူမှ အတင်းမကျွေးဘူး..
လန် ့တောင် လန့်သွားတာပဲ
ဗိုလ်ချူပ်ပြောခဲ့သလို သောက်ကျင့်တွေ ပြင်ကြပါ။ သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ရေးကြပါ၊ ဝေလေလေနဲ့ ထင်ရာတွေကိုပြော ထင်ရာတွေကိုရေး နေရင် တိုင်းပြည်အတွက် အမှိုက်တွေပါ။ ဒို့ဗိုလ်ချူပ်ကိုလည်း မုဒိန်းကောင်တွေခေါ်လါတယ်ဆိုပြီး သောက်ရူးတွေ ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။
ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် အာဇာနည် တွေထဲမှာ အားလုံးပါကြပါတယ် သတိရကြမှာပါ။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရန်အတွက် လက်တွေလိုနေတာပါ၊ ပါးစပ်တွေမဟုက်ပါဘူးကွာ။ ၈နစ်ရှိပြီ ငါစောင့်နေပါတယ်။
မည်သည့်ဘာသာမဆို မျက်လုံးမှိတ်ပြီး မကိုးကွယ်ပါနှင့်ဘာသာဆိုတာ ယုံကြည်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်တဲ့အတွက် ဘာသာပြောင်းတိုင်း လူမျိုးပြောင်းသွားတယ်လို့ထင်နေသမျှ ဒို့ဗမာတွေအလိမ်ခံနေရမှာပါ။ (BURMA =MYANMAR)
သမိုင်းကြောင်းကိုပြောရင် ငါကိုယ်တိုင်မျိုးစစ်ရဲ့လါး ရှက်ရပါတယ်၊ အရီးကြီးခေတ်လေ……………..ဒို့ဗမာတွေ ဘယ်လောက်ပြုပြင်နိုင်မှာလည်းတော့ မသိပါဘူး၊အသိနှင့် လုပ်ရပ်တွေလွဲနေပါတယ်၊
ရီစရာမဟုတ်ပါ၊ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကို မတော်တဆ တိုက်မိခဲ့လျှင် နိုင်ငံခြားသားက ဆောရီးတဲ့၊ ဗမာက မင်းဘာကောင်လည်းဆိုပြီ ရန်ဖြစ်ကြတယ်၊ နိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက်ကို အရမ်းလှတယ်လို့ ပြောလျှင် နိုင်ငံခြားသူက သိုင်းကျုးတဲ့၊ ဗမာသူက ပါးကျိုးမယ်၊ ဟိုဟာစားတဲ့လေ……….ဪ ဒို့ဗမာတွေ ရှက်စရာကြီးကွာ။
ဂေဇက်ရဲ့ အမာခံ ရွာသား အနေနဲ့ ဒီ အချိန်မှာ ဒီလို အခေါ်လေး ကို တော့ ရှောင်လိုက်ပါရှင်။
ရှင် က သဘောရိုး နဲ့ ပြောပေမဲ့
အဲဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ပြည်တွင်း မငြိမ်မသက် ဖြစ်အောင်၊
ကျွန်မတို့ကို အာဏာရှင်လက်က လွတ်မသွားအောင်
လုပ်နေတဲ့ လူတွေ အတွက် သဘောခွေ့ နေပါမယ်။
ဒီ အချိန်မှာ တတ်နိုင်သ၍ ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေ အတွင်း မှာ အေးအတူပူအမျှ နေနေကြရတဲ့ လူမျိုးဘာသာ မရွေး မိသားစု လို သဘောထားပြီး အဲဒီ အာဏာရှင်တွေကို မျိုးဖြုတ်ရပါမယ်။
မဆိုင်တဲ့ အကြောင်း တွေကို ဆွဲယူပြီး ပြသနာရှာနေကြရင် အဓိက ခံရမှာ မဆိုင်တဲ့ ပြည်သူတွေပါ။
ကျွန်မတို့ အားလုံး သတိမပြတ်ထားပြီး စည်းလုံးကြပါစို့။
Face Book ထဲမှာ တွေ့လိုက်တဲ့ စာလေး ကို ကော်ပီ လုပ်ပေးပါတယ်။
ကုလား” ဆိုတဲ့ဝေါဟာရက ပါဠိလို “ကုလ” မွန်လိုဆိုရင် “ဂလာ” ကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။
“ကုလ” ရဲ့အနက်ကတော့(န) အမျိုး၊ မြတ်သောအမျိုး ၊ အိမ်၊ မိဘအိမ်၊ အလုပ်ကျွေးဒါယကာ လို့သိရပါတယ်။
“ကုလား” ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကို မြန်မာအဘိဓာန်မှာ ၁။အိနိ္ဒယတိုက်ငယ်ဒေသမှလာသောသူများ၊ ၂။သာမာန်အားဖြင့်မြန်မာနိင်ငံအနောက်ဖက်ရှိတိုင်း နိင်ငံများမှလာသောသူများ
၃။ စက္ကူချပ်ဖဲချပ်တွင် ၊ ဂျပ် ၊ ကွင်း ၊ကင်း ဖဲချပ်ကိုခေါ်သောစကား
အရပ်တွင်းစကားပြောတဲ့အခါမှာတော့”ကုလား” ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို မြန်မာနိင်ငံသားတွေ က ခေါ်နေကျ နုတ်ကျိုးသလိုဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီး
အဲဒါကြောင့် မိမိဝန်းကျင်မှာ ဘာသာရေးအဓိကရိုဏ်းဖြစ်အောင်
(တစ်ပါးသူတစ်ဦး တစ်ယောက် တစ်ဖွဲ့အပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှားစေခြင်း၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ထိပါးခြင်း၊ ဖရုဿဝါစာ ဆဲရေးခြင်း၊ ပဋ္ဋိပက္ခအသွင်ဆောင်သော မှတ်ချက်ပေးခြင်း
တို့ကို တွေ့ရှိက ဖျက်သွားပါမည်။ )
မိပြီ ။ မိပြီ ။
ဟဲဟဲ ၊ အရီးလတ်က မောင်စေတန် ရဲ့ ပရိတ်သတ်ကိုး ။
ဘုရား၊ ဘုရား။ မောင်စေတန် က ကိုအဘဖော များ ဖြစ်နေသလား။
အမှန်က သူများ ရဲ့ ကနေ တစ်ဆင့် အဲဒီနာမည်ကို အခုမှ သိရတာပါ။
သူများရဲ့ Face Book Page ကနေလို့ ပြောမလို့။
ကိုယ့်စာ ကို စီစစ်ရေး မလုပ်မိ မှု။
တစ်ဆယ် ကျပ်။ ;-)
ဟိဟိ.. အာဟိ… တားတားလည်း မောင်စေတန် ပရိသတ်..
ဒါမှ တို့ အဘဖောကွ…
စောက်နဲ့ ကုလားကြားမှာ (ပတ်) ထည့်လိုက်ရင် ပိုပြည့်စုံတာပေါ့ကွာ…
shame on you…… :mad: :mad: :mad:
put your mum in front of kalaa
ကဖုတ်ကျော်… ခင်ဂျားဂျီးဂ .. ဝုတ်မရွှင် နဲ့လဂျာ ..
ခင်ဂျားဂ အဝေးကနေပြီး လုပ်နေ … ဒမှာ ကျုပ်တို့က စစ်တလင်းပြင်ထဲနေနေရတာ..
လှုံ့ဆော်မှုတွေ လုပ်နဲ့ဂျ …အေးဆေးနေဇမ်းဘာဂျာ…။
Aung San Suu Kyi talks to Myanmar Muslims leaders at the National League for Democracy head office in Yangon June 6, 2012. REUTERS
ဒီလိုပြသနာတွေ ဖြစ်လို့ရှိရင် ကျမရဲ့ အတွေးက ကိစ္စနှစ်ခုဆီကိုရောက်သွားတယ်… နံပါတ်တစ်က တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့၊ နံပါတ်နှစ်က လှုံဆော်တဲ့သူများရှိလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်ပူပင်မှုပါပဲ…
ဥပဒေစိုးမိုးရေးလို့ ကျမဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ ဒီနိုင်ငံမှာ ဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိတယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး ပြသနာတစ်ခုဖြစ်ပြီ၊ အရေးတခုခုဖြစ်ပြီ၊ ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုထဲက ပီပီပြင်ပြင် မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီပြသနာတွေက ပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး…
ပြသနာတစ်ခု မရှင်းလိုက်တာနဲ့ နောက်ထပ်ပြသနာတစ်ခု ထပ်ပြီးပေါ်လာတယ်… ဒါဟာ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတွေက ရှင်းလင်းရမယ့် ပြသနာ… ဥပမာ- ရာဇဝတ်မှုဖြစ်လာရင် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကို ဖမ်းရမှာ အရေးယူရမှာ၊ အမြန်ဆုံးပေါ့နော် အရေးယူရမှာက ရဲအဖွဲ့နဲ့ဆိုင်တယ် တရားရုံးတွေနဲ့ ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်… အဲ့ဒါကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် ပြသနာတွေကို ထိန်းထားလို့ရတယ်… မြန်မြန်ဆန်ဆန် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ပြသနာတွေက တဆင့်နဲ့ တဆင့် ကြီးထွားနိုင်တယ်…
နောက်တခု ကျမက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်… ဒါဟာလဲ ကျမတို့ ပြည်သူပြည်သားတွေက ဒီစိုးရိမ်ပူပင်မှု ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်… လှုံဆော်နေတဲ့ သူတွေများ ရှိသလား… အခြေအနေကို မတည်ငြိမ်အောင် လှုံဆော်နေတဲ့ သူတွေများ ရှိသလား…
တချို့ကျတော့ အခြေအနေကို မတည်ငြိမ်အောင် လှုံဆော်တာမဟုတ်ဘဲ စင်မြင့်ရှိရင် ထပြီး တက်ပြီးတော့ အော်ချင်တဲ့ သူတော့ရှိတယ်… အဲ့လိုအော်ခြင်းအားဖြင့် ကျမတို့အတွက်၊ ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်၊ ကျမတို့ လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အကျိုးရှိလား မရှိဘူးလား၊ ဆိုတာကို မဆင်ခြင်ဘဲနဲ့ ထပြီးတော့ အော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒါကလဲ မလိုလားအပ်ဘဲ ပြသနာတွေကို ကြီးထွားနိုင်စေတယ်…
အဲ့တော့ ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ ဘယ်သူမဆို လုံလုံခြုံခြုံ ရှိတယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်စေချင်တယ်… နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ သိက္ခာဟာ ဒီနိုင်ငံက ပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံမှုနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု အပေါ်မှာ မူတည်တယ်… စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာ လူနေမှုက စရမှာပဲ… မလုံခြုံတဲ့ သူတွေက ဘယ်တော့မှ စိတ်ချမ်းသာမှာ မဟုတ်ဘူး…
ဒီနိုင်ငံမှာ ကျမတို့ရဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေ အားလုံး၊ လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး။ တိုင်းသူပြည်သား မဟုတ်တဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ လုံခြုံမှုရှိတဲ့ နိုင်ငံမျိုး ဖြစ်စေချင်တယ်… ဥပမာ- ကျမခုနက ပြောတဲ့ ထိုင်းမှာ ကျမသွားတဲ့အခါမှာ အင်မတန်မှ စိတ်လုံခြုံတယ်… ကျမက ထိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူး၊ ဧည့်သည်ပဲ၊ ဒါပေမယ့် ဒီဧည့်သည်တစ်ယောက်ကို စိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ စိတ်လုံခြုံအောင်လို့ လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ အဲ့နိုင်ငံရဲ့ သိက္ခာ ဘယ်လောက်မြင့်လဲ… ကျမတို့နိုင်ငံမှာ ဧည့်သည်တွေရော၊ ဒီမှာနေတဲ့ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ ရော၊ အားလုံးဟာ လုံခြုံမှုရှိဖို့ ကျမတို့ ဦးတည်ရမယ်…
ဒါကြောင့် ကျမတို့ အတန်တန် လူတွေ နားညည်းလောက်အောင် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေး လို့ ပြောနေတာပါ… ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကို ထိထိမိမိနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကိုင်တွယ်လိုက်နိုင်မယ် ဆိုရင် မီးစကနေပြီးတော့ မီးတောက်ကြီး ဖြစ်မသွားဘူး…
အခု ဥပဒေစိုးမိုးရေး အမြင်နဲ့ ဒီပြသနာတွေကို ထိန်းသိမ်းစေချင်တယ်… ကျမတို့ ပြည်သူလူထု အားလုံးကလဲ ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့အေးချမ်းမှု၊ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ သိက္ခာရှိမှုကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ လုပ်စေချင်တယ်…
ဒေါသကို အခြေခံပြီးတော့ မလုပ်ပါနဲ့…ကျမတို့ဟာ ပုတုဇဉ်လူသားတွေချည်းပါပဲ၊ ဘယ်နိုင်ငံကဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ဘာသာပဲ ကိုးကွယ်ကိုးကွယ် လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တယ်၊ လုံလုံခြုံခြုံနေချင်တယ်…
နောက်တစ်ခုက ကျမအမြဲတမ်းပြောတယ် လူများစုဆိုတာ လူနည်းစုကို ဂရုဏာထားရမယ်… အဲ့ဒါတော့ ကျမသတိပေးပါရစေ… ကျမ ဒီလိုပြောတာကို တချို့က ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်မယ်… ကြိုက်တာ မကြိုက်တာထက် ပြောသင့်တာကိ်ုတော့ ကျမပြောရမယ်… လူများစုဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ အင်အားက ရှိပြီးသား၊ ကိုယ့်ရဲ့ အများစု အင်အားက ရှိပြီးသားမို့ ပိုပြီးတော့ သဘောထားကြီးနိုင်ရမယ်၊ ပိုပြီးတော့ ဂရုဏာတရားထားနိုင်ရမယ်…
ကျမတို့ နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဘာသာမရွေး ၊ လူမျိုးမရွေး၊ ချစ်ချစ်ခင်ခင် နဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်းနေတာကို ကျမက မြင်ချင်တယ်… ဒီလိုဖြစ်ဖို့ အတွက် ကျမတို့အနေနဲ့ ကူညီနိုင်တယ်ဆိုရင် ကျမတို့ ကူညီမယ်…လုပ်ပေးနိုင်တာကို လုပ်ပေးမယ်… ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိစ္စတွေ ပိုကြီးထွား မလာအောင်လို့တော့ ကျမတို့ သတိပြုပြီး ရှောင်ရပါမယ်…
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆ ဇွန် ၂၀၁၂)
DVB သတင်းထောက် ကိုခွန်ခေါင် နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ ့ဆုံ မေးမြန်းချက်မှ
Daw Khin Latt likes mgsatan and Dr Chatgyi. I think it isanormal sexual preference.
ဒေါက်တာချက်ကြီး ဆိုတာ ကို ကြားတော့ကြားဘူးပါရဲ့။
ဒါပေမဲ့ သူတို့တွေထက် ရှင့် အရေးကို ပိုသဘောကျပါတယ် ကဘုန်းကျော်ရယ်။
အစိမ်း၊ အနီဘာတွေမှန်းမသိတော့လို့ MG ကိုဖတ်တော့ဖတ်တယ်…. မှတ်ချက်မပေးတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ ခဏမေ့ပြီးရေးလိုက်အုံးမယ်… ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးတွေ အခုအချိန်မှာ ခြေရှုပ်နေပြန်တယ်… ရောင်နီလေးသန်းလာလို့ပျော်မယ်ကြံသေးတယ်။ နေကြတ်တာလား၊ လငပုတ်ဖမ်းတာလား။ အမှောင်ဘက်ပြန်ရောက်မယ့်နိမိတ်တွေပြန်တွေ့နေရတယ်။ ပြည်သူတွေ နားမလည်သေးရင် ဝတ်ကျွတ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ မှန်ကန်တဲ့ဥပဒေ ဖြစ်နိုင်ရေးကို ပြည်သူတွေက ဝိုင်းရမှာ… အခုဟာက ဘောင်အပြင်ရောက်နေတယ်… မျက်ဖြူစိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေဆိုတာ မမေ့ကြပါ နဲ့ဗျာ…. ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းလာရတဲ့ခေတ်တွေ ကျွန်တော့်တို့သားသမီးတွေမဖြတ်ရရေး ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းရမှာ……. မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေကြံဆနိုင်ကြပါစေ……….. မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေတည်တံ့ရေးဝိုင်းဝန်းနိုင်ကြပါစေ…..
ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် တော်ပါတော့နော် ။
phone kyaw go and ask your mum who f*** your mum for giving you birth. may be some one from kalaa. thats why you hate them alot. your mum may be same like you. even though she have married to your dad she may be having affair with some kalaa. if you use bad language to some one they will reply you in same way. how can you tell exactly you are half pa ain and half burmese. phaa 1/2 ngaa 1/2.
ဩဇီလိုနေရာမှာနေရတဲ့ ကိုဘုန်းကျော်ရေ—–ခင်များနဲ ့အတော့်ကို
သဘောတိုက်ဆိုင်တာက“မြန်မာပြည်က ကုလားက ရိုဟင်ဂျာကို စိတ်ဝင်စားဖို ့နေနေသာသာ ကွမ်းယာရောင်းတာတောင် လက်မလည်ဘူး။ တကယ်တမ်းသတိ္တရှိရင် နိုင်ငံခြားက ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ပြည်တွင်းမှာ လာအော်ကြည့်ပါလား။ တခါတည်း ဝက်သားနဲ ့ညားသွားနိုင်တယ်။ မရိုးသားတာကို ပြောချင်လို ့ပါဗျာ။”
ဒါပေမယ့် ခေါင်းစဉ် မကောင်းဘူး။ပြည်ပရောက်နေသူတယောက်အနေနဲ ့အမြင်ကျယ်သင့်ပါ၏။
ကုလားလို့ခေါ်တာခေါ်လို့ရပေမယ့် စောက်ကုလားလို့ခေါ်ရင်တော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲတွေးကြည့်ပါ ရိုင်းတာပေါ့ဗျာ။
ကိုဘုန်းကျော်ရေ မှန်တိုင်းလဲမကောင်းတဲ့။ မပြောတော့ပါဘူး။ နဂိုကမှ ဒီဆိုဒ် ဝါဒဖြန့်တယ်ဖြစ်နေတာ။ လက်ရှောင်လိုက်မယ်။
ဖတ်ပြီး ဘာမှ သိပ်မဝေဖန်ချင်ပါဘူး … ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး ပြုံး စိစိတော့ ဖြစ်မိပါတယ် ကဘုန်းကျော်ရယ် …
ဒီနေ့မှရတဲ့ နာမည်လေးပါ။ခင်ဗျားနဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း သဘောထားချင်းလာ တိုက်ဆိုင်နေတယ်။
ငါတို့ကတော့ သူတို့မခေါ်စေချင်တဲ့ ကုလားလို့မခေါ်တော့ဘူးဟေ့။(ခွားကလေး)ဟေ့(ခွားကလေး)
အခုဆန္ဒပြတာကကုလားလို့ခေါ်တာကိုုမကျေနပ်ချင်းမဟုတ်ပါ ကုလားလို့အချင်းချင်းနောက်ပြောင်ခေါ်တာပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့ နိုင်ငံတော်အဆင့်သတင်းစာက ဘန်းစကားလိုးအသုံးအနှုံးကိုတရားဝင်သုံးသွားလို့ပါ နိုင်ငံခြားမှာ လူမည်းအသုံးအနှုံးဆိုတာ တရားဝင်မသုံးရပေမယ့် သာမန်နေ့စဉ်သုံးတွေ ဟာသကားတွေမှာတောင် လူမည်းတွေကိုယ်တိုင်ဟာသဖောက်နေတာပါ အဓိကက မငုံးသင့်တဲ့နေရာမှာသုံးမိလို့ပါ
ကို်ယ်တို့လဲ ဘုရားလို့မသုံးဘဲ ကုလားလို့သုံတော့မယ်
စားကလောက်တော့ စောက်ကုလား ..
နင်လား .. ငါလား ..
သေချာတာတော့ ဘယ်လိုခေါ်ခေါ် လူဟာ လူပဲ ..
ဒီဂလူ သုံးထားသလို ပြန်ပြီး သုံးကြည့်လိုက်ဒါ ..
ဘာရယ် ဟုတ်ပါဘူးလို့ .. အဟီး ..
ကိုယ့်လူတွေကို ပြုပြင်နေရင်းနဲ့ အမေမောနေမှာကို သာစိုးရိမ်မိပါတယ်၊
ကိုယ့်လူတွေကို ပြုပြင်နေရင်းနဲ့ အမေမောနေမှာကို သားစိုးရိမ်မိပါတယ်၊
Myanmar Muslim says:
မမေးလည်းဖြေ – ဘာကြောင့် ကုလားမဟုတ်ချင်တာလဲ???
ဒီကြွေးကြော်ချက်နဲ့စချင်ပါတယ်။ ကုလားမဟုတ် မြန်မာမွတ်စလင်မ်ဖြစ်သည်။
တောင်ကုတ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်အစွန်းရောက်တွေ ရက်ရက်စက်စက် အကြမ်းဖက်အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၁ဝ ဦးကိစ္စ သတင်းကြေညာရာမှာ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ ့မြန်မာသတင်းစာတွေက “မူစလင် ကုလား” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တွင်တွင်သုံးပြီး ကြေညာသွားပါတယ်။ ဒါကို မြန်မာမွတ်စ လင်မ်တွေက မကျေနပ်လို့မကျေနပ်တဲ့အကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်တော့ ကုလားမလို ့ကုလားခေါ်တာ ဘာဖြစ်လဲတို ့၊ ကုလားလို့မခေါ်ရင် ဘယ်လို ခေါ်ရလဲ လို့ရိုးရိုးသားသားမေးတဲ့လူရှိသလို ဒီလောက် ပူလောင်နေတဲ့ အချိန်မှာတောင် ကုလားကို ရမရာမရှိ မိဘမောင်နှမများရှေ့မပြောရဲတဲ့ စကားလုံးများနဲ့ဆက်ပြီး ဆဲနေတာတွေတွေ ့ရတယ်။
ဘာကြောင့် ကုလားဆိုပြီး အခေါ်မခံချင်ကြတာလဲ။
ဒီမေးခွန်းကို ကုလားဆိုပြီး မွေးကတည်းက အခေါ်ခံ အနှိမ်ခံလာရတဲ့ ကျနော်တယောက် ရှင်းပြပါမယ်။ ကျနော်ပြောတာ မသိလို ့လေ့လာချင်လို ့ဆိုရင် ဆက်ဖတ်ပါ။ လူတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲ လူပေါင်းများစွာရဲ့ခံစားနာကျည်းချက်ကို သူတို ့အားလုံးကိုယ်စား ကျနော်ပြောပါမယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေ ကျနော်ပြောတာ လက်ခံရင် ခံစားချက်ချင်းတူတယ်ဆိုရင် Like လုပ်ခြင်း၊ Share ပေးခြင်း၊ ယဉ်ကျေးစွာ ကော်မန် ့ချခြင်ဖြင့် ကိုယ့်ဆန္ဒကိုယ်ဖော်ထုတ်ပြပါ။
ဘာကြောင့် ကုလားဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မုန်းတာလဲ။ မဖြေခင် မေးခွန်းတခုမေးပါမယ်။ သင်သိပ်ချစ်ရမဲ့ သင့်သားလေးကို သန်းရွေဆိုပြီး နာမည်ပေး မလား။ သန်းနဲ့ရွှေ စကားလုံး ၂ လုံးအကောင်းချည်းပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီနာမည်ပေးမလား။ ဒါနဲ ့တင် ပြည့်စုံပါပြီ။ အဲ့ဒီ စကားလုံးတွေရဲ့နောက်ကွယ်က အဓိပ္ဗါယ်တွေကြောင့် အဲ့ဒီနာမည်ကို မထားချင်တာ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒီလိုပါပဲ —
ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဆိုတဲ့ ပညာတတ် နိုင်ငံခြားမှာလဲ နေနေတဲ့ မြန်မာတယောက်တောင် ကုလားလို ့ခေါ်တာ လက်မခံနိုင်တဲ့ လူတွေက မခေါ်ပါနဲ ့လို့ပြောတာတောင် သူ ့စိတ်ထဲဘာမှမရှိလို့ဆက်ခေါ်မယ်ဆိုုမှတော့ နိုင်ငံခြားလည်းမရောက်ဘူး၊ ပညာလည်းအားနည်းတဲ့ မြန်မာအများစု နားလည် မပေးနိုင်တာလောက်တော့ မဆန်းပါဘူး။ ခံရတဲ့လူမဟုတ်တော့ ဘယ်နာပါ့မလဲ။ နာတဲ့လူတွေ နာတယ်လို ့အော်တာလည်း ဘယ်ကြားပါ့မလဲ။ ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲလား ငါအသိအတတ်ဆိုပြီး သူများတကာရဲ့နေ့စဉ်နဲ ့အမျှ ထိတွေ ့ခံစားချက်ကို နားမလည်နိုင်အောင် အသိတရားတွေ စိုင်ခဲနေပြီး အသည်းမာကြောတာလားတော့ ပြောမတတ်ပါ။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာတွေဟာ ယဉ်ကျေးပျူငှာပြီး အေးချမ်းတဲ့ လူတွေမလို့နားမလည်သေးတဲ့ ကျနော်တို့ခံစားချက်ကို နားလည်ပေးအောင် တတ်နိုင်သလောက်ရှင်းပြပါမယ်။
ကုလားဆိုတာ ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာ အမျိုးမျိုး အဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ကြတယ်။
အနောက်ဖက်ကနေ မြန်မာပြည်ကို ကူးလာတဲ့လူတွေမလို့ကုလားလို ့ခေါ်တာလို ့ပြောရင်
(၁) ကျနော်တို ့ဟာ မြန်မာပြည်မှာမွေး မြန်မာပြည်မှာ ကြီးတာပါ။ မိဘ မပြောနဲ့အဖိုးအဖွားတွေတောင် မြန်မာပြည်မှာ မွေးကြတာ။ မကူးလာတဲ့ အတွက် ကျနော်တို ့ကုလားမဟုတ်ပါ။
(၂) ကျနော်တို ့က ကုလားတွေဆိုရင် နှစ်ရာပေါင်းများစွာက တိဘက်၊ အနိ္ဒယ၊ မွန်ဂို၊ တရုတ်တောင်ပိုင်းကနေ စတင်အခြေခံ ဆင်းလာတဲ့ ဗမာတွေရော တိုင်းရင်းသားတွေရော အားလုံး တနေနေရာက ကူးလာတာမလို့ကုလားတွေချည်းမဟုတ်ဘူးလား။
(၃) ထိုင်းနဲ ့မလေးရှားမှာ မြန်မာပြည်ကကူးလာတဲ့ ဗမာတွေ တိုုင်းရင်းသားတွေရှိတယ်။ သူတို ့လည်း ကူးလာတဲ့ ကုလားတွေမဟုတ်ဘူးလား။ ဒါတွေထားလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီစကားလုံး ဘယ်ကလာလာ ကျနော့်ကို ကုလားလုို ့ခေါ်ရင် အသေနာတယ်။ အရင်က အဲ့ဒီလောက်မနာပေမဲ့ ခုဆိုရင် ရင်ထဲ အသည်းထဲကထိနာတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကုလားကို အကောင်းဖက်က ဘယ်တုန်းက သုံးလို ့လဲ။ ကုလားဆိုရင် Negative တွေက အလိုလို ပါပြီးသားပဲ။
ကုလားပြီး အမေနှမတွေနဲ ့ကိုင်ဆဲတယ်။ (သီးခံပါ) အခုဆိုရင် မအေ -ိုးကုလား၊ ငါ -ိုးမကုလား။ သောက်ကုလား၊ -ီး ကုလား၊ ခွေးကုလား ဆိုပြီး တွင်တွင်ကြီးဆဲနေကြတာ အားလုံးအသိပဲ။
နေ ့တဓူဝ အပြင်လောကမှာလည်း ဆဲချင်ရင် ကုလားလို ့သုံးတယ်။ ချစ်တီးကုလား၊ ကုလားကျင့် ကုလားကြံ၊ ကလေးကုလား၊ သောက်ကုလား စသဖြင့်။ ကုလားဆိုတဲ့ စကားလုံးမှာ မကောင်းတဲ့အနေနဲ့Negative အနေနဲ ့ပဲ သုံးတော့တယ်။ သီချင်းထဲမှာတောင် ကုလားတို ့စိတ်ဓာတ် အားကြီးမုန်းတယ်ဆိုပြီး ဆိုသမား ဆိုတယ်မလား။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလည်း ကုလားဆို နှိမ်ဖို ့လောက်ပဲ ပြောကြတယ်။
ကုလားလို ့အခေါ်ခံလိုက်ရရင် နာမဝိသေသနာ ဘာမှမပါရင်တောင် နှိမ်ချပြီး ခေါ်သလို ခံစားရတယ်။ ဆဲတဲ့ စကားလုံးတွေ အော်တိုပါပြီးသားလို ခံစားရ တယ်။ အလွန်အမင်းနှိမ်ချပြီး ခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်လို ့ပဲ ခံစားရတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေက ကုလားဆိုပြီးဆဲတယ်။ ဆရာဆရာမတွေကလည်း ဟဲ့ကုလား ဆိုပြီး ခေါ်တယ်။ ကုလားလေး ကုလားလေးဆိုပြီး သူငယ်ချင်းတွေက နောက်တယ် ပြောင်တယ်။ သူငယ်တန်းကအစ ၁ဝ အောင်ပြီး အဲ့ဒီသူငယ်ချင်းတွေနဲ့လမ်းခွဲတဲ့အထိပဲ။
ကုလားဆိုတာ အနောက်တိုင်းမှာ အာဖရိကတွေကို ခေါ်တဲ့ နစ်ဂါတို့နီဂရိုး လို ခွဲခြားတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်တယ်။ အနောက်တိုင်းမှာ နေ ့တဓူဝမှာတောင် သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းကြားမှာတောင် နစ်ဂါလို ့ခေါ်လို ့မရဘူး။ သတင်းတွေ စာတွေ ရုပ်ရှပ်တွေမှာ သုံးရင် တရားစွဲခံရသလို အလုပ်လဲပြုတ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာတော့ ကုလားဆိုတာကို နေရာတိုုင်းမှာ တွင်တွင်ကြီးသုံးနေလေရဲ ့။ အစိုးရသတင်းစာမှာရော အတိုက်အခံသတင်းဌာနတွေမှာပါ သုံးနေလေရဲ ့။
ကုလားဆိုတဲ့ အသံကြားရင် အဆဲခံရသလို ခံစားရတဲ့အတွက် မွတ်စလင်မ်တွေအားလုံး ကုလားဆိုပြီး အခေါ်ခံရရင် ရင်ထဲအသည်းထဲကထိနာတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာတွေ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ကို ကုလားလို ့မခေါ်ကြပါနဲ ့။
ဒါဆို ဘယ်လိုခေါ်ရမှာလဲ —
လွတ်လပ်ရေးကာလတုန်းက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်စလင်မ်တွေကို ဗမာမွတ်စလင်မ်လို ့ခေါ်တယ်။ ဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ် သူတွေလို ့ဆိုလိုတာပါ။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးရာဇတ်ကိုယ်တိုင် အဲ့ဒီလို ခေါ်ဝေါ်ဖို ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီတုန်းက ခေါင်းဆောင်တွေ အသိအ မှတ်ပြုခဲ့တယ်။ အခု ဗမာနိုင်ငံအစား မြန်မာနိုင်ငံလို ့သုံးနှုန်းတဲ့အတွက် ဗမာအစား မြန်မာလို ့သုံးပြီး မြန်မာမွတ်စလင်မ် လို့ခေါ်ဝေါ်စေချင်ကြ တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေဆိုတာပါပဲ။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ဆိုတာ လူမျိုးမဟုတ်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာနေထိုင်ပြီး အစ္စလာမ် ဘာသာတွေကို ခြုံငုံပြီး ခေါ်ဝေါ်တဲ့ ယေဘုယျ နာမည်တခုပါပဲ။
ကုလားမဟုတ်ပါ – မြန်မာမွတ်စလင်မ်ဖြစ်သည်။
ယင်းစွာ အားလုံး လူ ။
အဲဒါ အားလုံး လူ ။
လူက လူကို လူလို့မမြင်ရင်
ရခိုင်လီး ကုလားကို သတ်
ကုလားလီး ရခိုင်ကို သတ်
ဗမာလီး ကုလားကို သတ်
ကုလားလီး ဗမာကို သတ်
လူအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ခြင်း ကင်းရှင်းပါစေ
မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုး၁၃၅ မျိုးထဲ က ဘယ်မျိုးနွယ်ကများ ဆင်းသက်လာပါသလဲ ..။
အင်း မြန်မာမွတ်စလင် ခေါ်ရတာရှည်တယ် သူငယ်ချင်းရယ်။
အဲဒီတော့ အတိုကောက်ပေါ့ ဥပမာ-ပြည်ခိုင်ဖြိုး(ကြံ့ဖွတ်)။
အခုလည်း မြန်မွတ်(ဒါမှမဟုတ်)မာစလင် အဲဒီထဲကတစ်ခုခုနဲ့ခေါ်ကြည့်မယ်။
မြန်မွတ်က ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ မွတ်စလင်ထဲမှာလည်းကောင်းတဲ့သူ ဆိုးတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာ
တော့ လက်ခံပါတယ်။ မကောင်းတဲ့သူများရင် မကောင်းသတင်းထွက်မယ်။ ကောင်းတဲ့သူများရင်
ကောင်းသတင်းထွက်မယ်။ ကိုယ်ပြုသောကံကိုယ့်ထံပြန်တယ်။ မြန်မာတွေ ကိုယ့်လူမျိုးမကောင်းရင်ကိုယ့်လူမျိုးကိုဆဲတယ်။ အမှားအမှန်သိတယ်။
ဝလွန်းတဲ့သူ ဝက်ခေါ်တယ်ကွာ။ ပိန်လွန်းရင် ငါးဖောင်ရိုးခြောက်ခေါ်တယ်ကွာ။ ဒါအမှန်ပဲ။
မကြိုက်လည်း ဘဝပေးကုသိုလ် ပဲကွ။ ဒီလိုပဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိနေမှာပဲ။
ကုလားအခေါ်ခံရတာမကြိုက်ရင် ကုလားဖြစ်ရတာကိုပဲ စိတ်နာလိုက်ပါ။ သူများတိုင်းပြည်သွားနေရတဲ့မြန်မာတွေ ထိုင်းမြန်မာ ခေါ်ပေးပါလို့မတောင်းဆိုဘူး။
မလေးမြန်မာသတ်မှတ်ပေးပါ မတောင်းဆိုဘူး။ ဩဇီမြန်မာ သတ်မှတ်ပေးပါ မပြောဘူး။
စင်ကာပူမြန်မာ လို့ခေါ်ပေးပါမပြောဘူး။ နိုင်ငံသားခံယူချင်ယူမယ် မြန်မာလူမျိုးကမြန်မာပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံကို ကြည့်ပါဦး။ ကျွန်မတို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို အနောက်ဘက်က လူမျိုးခြားတွေဝင်လာတာကိုက ကောင်းတဲ့လက်ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ အမျိုးစောင့်စိတ်ဓါတ် တွေကြောင့်သာ တစ်နိုင်ငံလုံး ကုလားပြည်ဖြစ်မသွားတာကို ကျေးဇူးတင်ကြပါ။ ရခိုင်တွေက ဗမာတွေကို အောက်သားလို့ခေါ် တာပါ။ အညာသားတွေလည်း ရန်ကုန်သားတွေကို အောက်သားလို့ ခေါ်ကြတာပဲလေ။ ရခိုင်တွေက ဗမာတွေကို စောက်ကုလားလို့ ခေါ်တာတော့ မကြားမိပါဘူးကွယ်။
ကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့ ဟာသလေးတစ်ပုဒ် ပြောချင်တယ် ဘာလဲဆိုတော့ ကုလားဆိုတဲ့ အသုံးနှုန်းကို မသုံးရဘူးဆိုရင် ကုလားထိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ထိုင်၊ ကုလားပဲဆိုတဲ့နေရာမှာ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ပဲ
ကုလားအော်သီးဆိုတဲ့နေရာမှာ မြန်မာမွတ်စလင်မ် အော်သီး
တရုတ်ကို တရုတ်လို့ခေါ်တာ တရုတ်က မနာဘူး
ဘာလို့လဲဆိုတော့ တရုတ်က တရုတ်ပဲကိုး
တခြား ဘာသဘောမှ မပါဘူး
ဟုတ်ပါပြီ မြန်မာမွတ်စလင်မ် ခင်ဗျား….
ကျွန်တော် မေးချင်တာများလည်း ဖြေပေးပါခင်ဗျား
၁။ရိုဟင်ဂျာ အရေးအား မြန်မာမွတ်စလင်မ် များအနေဖြင့် မည်သို့သဘောထားပါသလဲ။
၂။ဘယ်သို့သောအကြောင်းကြောင့် အသတ်ခံရသော မြန်မာမွတ်စလင်မ် များပြသနာတက်နေသော
(fb ကသတင်းတွေ မခိုင်လုံလို့ထားလိုက်ပါ)
မြန်မာလို့ဆိုရအောင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတစ်ခုခုက ဆင်းသက်လာပါသလား။
ဥပမာ။ ခရစ်ယန် ချင်း လိုပေါ့ဗျာ။မွတ်စလင်မ် ချင်း၊ရှမ်း၊ရခိုင်….. စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။
ရှင်းလင်းအောင်ရှင်းပြပါခင်ဗျား။ အမှတ်(၃)အတိုင်းကိုက်ညီပါက မြန်မာမွတ်စလင်မ်ဟုခေါ်ယူသင့်ပါကြောင်းးးးးးးးးးး
“ကုလား” လို.မခေါ်ကြနဲ. “ကလီး” လို.သာခေါ်စေဗျား ဂေဇတ်ကမန်ဘာတစ်ယောက်ပြော
ဘုန်းကျော် ပိုစ့်ကို မဖတ်ဘူး
မမန့်ဘူး လို့ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပေမယ့် ဒီခေါင်းစဉ်တပ်လာလို့ ဘာရေးထားပါလိမ့် လို့ ဝင်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကျန်တာတွေ စိတ်မဝင်စားပေမယ့် ကွန်မင့် တစ်ခုကို စိတ်ဝင်စားသွားခဲ့တယ်။
ဘုန်းကျော် ဟာ ဩဇီ မှာ ထိုင်းဘက်က ဝင်လာတဲ့ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့် တောင်းမယ့်လူတွေကို ဩဇီက အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ကြားဝင်ပြီး ပွဲစားလုပ်ခဲ့ကာ ကြီးပွားနေတယ် လို့ မန့်သွားတယ်။
ဘုန်းကျော် ဘယ်လို ပြန်ဖြေမလဲ သိချင်လို့ ဒုတိယ တစ်ခါပြန်ဝင်ဖတ်တော့ အဲဒီ ကွန်မင့် ကို မတွေ့ရတော့ဘူး
ယောက်ျားမှ ဟုတ်ရဲ့လား ဘုန်းကျော်ရယ်
အခု ကွန်မန့်မှာဖြေပေးပါ မဟုတ်ရင် ပို(စ့်)အသစ်တင်ရှင်းပါ။
ခင်ဗျားရေးတာ ထဲမှာ ဒီတစ်ခုကပဲ သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်တယ်။
အရင်ပို(စ့်)တွေရေးပြီး ခင်ဗျားက ပြန်ပြန်ပျေက်သွားတယ်နော်။
ကိုယ်ရေးတာကို ကိုယ်တာဝန်ယူပြန်ရှင်းရမှာ ဂေဇက်ထုံးစံပါဗျာ။
ခင်ဗျားက အန်တီကိုတောင် မောင်စေတန်၊ဒေါက်တာချက်ကြီး ဟာသဘာဝပါဆိုပြီး
ရူးကြောင်ကြောင်နဲ့ မှားရင်တန်းသိက္ခာချတာ ဒီကွန်မန့်တွေကိုလဲ ရှင်းပေးပါ။
အရီးက မောင်စေတန် ဆိုတာ အရင်က မကြားဘူးပါဘူး။
အခုမှ တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခု ဘဲ ဆိုပြီး ဂူးဂဲလ်လိုက်မှ အဲဒီ အမည် နဲ့က Porn Site Owner ဖြစ်နေတာ ကိုတွေ့ရတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ်မသိတဲ့ အရာတွေ အများကြီး ဆိုတာ ပိုသိလာပါတယ်။
အရီး ကလဲ ပေါ့စေလို ကြောင်ရုပ်ထိုး ဖို့အဟုတ်ကြီးလုပ်ပြီး ကောင်းနိုးရာရာ ကော်ပီ ကူးကာမှ ဟာသ ဖြစ်သွားတာ။
အရီး ရဲ့ မှားချက် က ဟာသ လိုဖြစ်သွားလို့ ဒင်းတို့ ရီနိုင်ကြရင်ဘဲ ကုသိုလ်ရ တယ် တွေးပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လဲ ဟားလို့ မဆုံးပါဘူး။ ;-)
ကိုဘုန်းကျော် က ဒီလိုပါဘဲ။ ဗွေယူမနေပါနဲ့။
ရွာထဲမှာတော့ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် ဟာ မောင်နှမ တွေလိုပါဘဲ တွေးပါတယ်။ :-)
လေသူရဲ ဇာတ်လမ်း တွေကို အလွန်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
အတွေ့အကြုံများ ရှိရင် မျှပါဦး။ :-)
အဲသည် ကဖုန်းကျော် သာ ဂျာနယ်ထောင်လိုက်ရင်၊ပေါက်တော့ပေါက်သွါးမှာ-
ထိတ်ပေါက် ခေါင်းပေါက် —- ဟီး ဟီး ။ ရေးတဲ့သူတွေလည်းပေါက်၊ ဖတ်တဲ့သူတွေလည်းပေါက်ပဲ။
သူ့ကို ဘယ်လိုကင်ပွန်းတပ်ရင်ကောင်းမလည်း ဟို- ဂဇက် ဂျိုကာ လို့တပ်ရမလား၊ ဂဇက်ဆိုင်းနောက်ထ လို့တပ်ရမလား။
i can tell you one Note.
what is kalar?? i haveaanswer first Kalar is gordama he is kalar its sure.
you will check it his history. he is indian people (its Mean Kalar)
kalar gordama how are you??
all myanmar people say to you sautkalar how do you think??
SOME people say to you sautkalar how do you think??
ကုလားထိ- ဘုရားမျက်နှာကြည့်တော့ ရောချ မလုပ်ကြဘာနဲ့ ကွယ်တို့ရယ်။
တို့ကတော့ ကုလားကိုး ကွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဗြဟ္မန မျိုးနွယ် ဘုရား ကိုးကွယ်တာ—–၊
အကျင့်သီလ၊သိက္ခာ၊သမာဓိ၊ပညာ နှင့်ပြည့်စုံသူ၊မကောင်းမှုမှန်သမျှကို စွန့်ပယ်နိုင်သူ၊
သံသရာ ဒုက္ခအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်ရာကို၊ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ရှာဖွေသူ ၊အောင်မြင်သူ၊ သတ္တဝါတွေကို ဒုက္ခ အပေါင်း မှ လွတ်မြောက်ရာလမ်းပြသူ၊မေတ္တာထားသူ အဖြစ် ပါဗျား။
ဘမျိုး ဘိုးတူ says:
ကုလားထိုင်ကို မွတ်စ် ထိုင် ၊
ကုလားတက်ခေါက်သံကို – မွတ်စ်တက်ခေါက်သံခေါ်စေ ၊
ကုလားထိုင်ကို – မွတ်စ်ထိုင် ခေါ်စေ ၊
ကျန်တာကို ကျန်တဲ့သူ ဆက်သတ်မှတ်ပါစေ ။
လှည့်ကွက်ထဲမရောက်ဖို့တော့လိုကြတယ်။ တိုင်းပြည်ဆူအောင်လုပ်ပြီး စစ်တပ်က အာဏာ ပြန်သိမ်းသွားမှာ ကိုတော့ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ရှေး ရှ့မှာလည်း သာဓကတွေ ရှိခဲ့တာပဲလေ။